Lasa vetaveta ve ny mpihra malagasy? - Vaovao Malagasy - serasera.org
FandraisanaMomba ny takelakaHampiditra vaovao?Tahirintsary Connexion
Lasa vetaveta ve ny mpihra malagasy?
Ajouté par : LEbotakelyLe : 24/06/2011Dans : Zavakanto	Fetin’ny
mozika izao, fetin’ny hira, fifalifaliana. Nankalaza izany isika teto Madagasikara tamin’ny faran’iny herin’andro iray lasa iny, raha tamin’ny
Talata kosa vao tena nankalaza izany ny firenena maro hafa. Raha tsiahivina fohy dia tamin’ny taona 1991 no nanomboka nisy ny fetin’ny mozika ka ry zareo frantsay no nanomboka azy io izay vao nihitatra tamin’ny firenen-kafa ka firenena 120 eran-tany izao no mankalaza izany.
Ekena tokoa ary tsy azo lavina fa ny andro tsy misy mozika dia andro maty, misaona, manjombona. Samy manana ny fomba fijeriny anefa isika eo amin’ity resaka mozika ity. Na raha ny marimarina kokoa dia ny mozika sy
ny fomba fitafin’ny mpanankato sy ny mpandihy. Tsy hoe manavakavaka ny mpanoratra eto fa te hanaitra ny saintsika foana. Tence Mena: Mpihira
Ahoana marina moa no hamaritana ny hoe : kanto ? Miainga avy amin’io no hamaritana ny mpanankato. Ny ahy hevitra ihany kanefa hevitra inoako fa iraisan’ny manam-panahy mizara ihany any anatiny any. Ny manam-panahy dia ireo mahatsapa fa tokony hisy fanabeazana tsara omena ny zanaka aman-jafy. Mametram-panontaniana ihany anefa ny tena satria maro ny mpihira no miteniteny foana sy manaonao foana. Ireny milaza tena fa mpanankato mihirahira fahatany ireny, sy ny mpandihindihy mitanjatanjaka ireny amiko dia mpisandoka ihany koa. Tokony hiady amin’ireny ny tena mpanankato alohan’ny hanenjika mpivarotra CD mpiraty etsy sy eroa. Tsy fanavahana mpihira fa misy ireo mpihira mafana sasany avy any avaratry ny nosy no tena mpandoto tsena. Eo amin’ny tononkira dia maivana dia maivana : tsy misy anatra, resaka mandeha ho azy, mitantara fotsiny. Eo amin’ny fiankanjoana sy ny fandihizana : miboridan-dridana mampidera fitombenana. Toa iny mihintsy no amidy ahazoana olona hitia ny « kantony ». Mieritreritra ve izy ireo fa tsy halaza raha toa ka manao maotina fitafy sy mihaja fihetsika ? Misy mpanakanto vitsivitsy ihany anefa avy any avaratra nanana ny lazany na dia nampiasa tononkira maotina sy fomba fitafy azon’ny rehetra jerena. Toa andry Clo Mahajanga,
Jean Rigo, Jojoby… Koa nahoana no voatery hivary lavo? Marihina fa tsy fanavahana an’ireo mpihira avy amin’ny faritra avaratry ny Nosy izany satria na dia ny eto Antananarivo koa aza dia misy ireo mpihira manao fitenim-boto, hira feno vetaveta sy mifanohitra amin’ny fitsipiky ny fanabeazana. Princio, ohatra amin’ny hirany sasany dia milaza « fa misy mpihira sy hira tena mila hampanary any anaty zordira », avy eo indray nefa ny hirany sasany dia miresaka firaisana sy fitombenana. Tokony ho fantatr’ireny mpihira ireny fa mpianaka, mpianadahy, olom-pady matetika no indray mijery sy mihaino ny hirany.
ny tsirairay manomboka amin’ny mpanakanto isanisany izay manana adidy hampakatra avo ny kanto gasy, ka hatramin’ny mpitondra fanjakana izay tokony hiaro ny zon’ny zaza sy ny tsy ampy taona manoloana ireny zavatra
mamoafady ireny. Eo ihany koa ny tsirairay izay afaka manome lanja ny mpihira manao zavatra tena kanto sy ireo mpihira mampiseho vatana fotsiny.
Christian Randriamalaza, tsy namotsotra ny anaram-boninahiny.
Voninahitra sy hafaliana ho anay mpiandraikitra ny takelaka Vaovao.org tokoa ny nihaona sy niresadresaka tamin’i Jean Christian Randriamalaza teto Roma androany 1 novambra, mialoha ny hodiany…
'Education for Madagascar' sy ny anjara birikiny hanampiana ny zaza malagasy.
Razilio sy ny gitara beso.
(Italie) - [0.0320 s.]